နှစ်သိန်းမပေးရင် ထောင်ချမယ်(သို့)ပြည်သူ့အသံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » နှစ်သိန်းမပေးရင် ထောင်ချမယ်(သို့)ပြည်သူ့အသံ
Posted by Nan Shin on Oct 1, 2011 in History | 8 comments
ဖုန်းနံပါတ်က anavailable တဲ့။အမည်မဖေါ်လိုသူလို့ပဲ ဘာသာပြန်ရလေမလား။ကိုနန်းရှင်လားတဲ့…..အရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ရင် ကူညီ
စားသွားလွန်း ပြန်မမေးဖြစ်တော့ပါ…………။ပြောလေ………ဖြစ်နိုင်ရင် ကူညီပါ့မယ်လို့ပဲ ပြန်ပြောမိတယ်။
ကျနော်က မြဝတီမြို့ ကိုးနဝင်းကျောင်း အနောက်ဘက်ပေါက်က ဆင်းဧကရီလမ်းမှာနေပါတယ်တဲ့….အဲ့ဒိကျနော်တို့နေတဲ့ ဆင်းဧကရီလမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီး ခရိုင်အဆင့် အာဏာပိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ တစ်အိပ်ကိုကျပ်ငွေနှစ်သိန်း မဖြစ်မနေပေးရမယ်
တဲ့…..ပြီးတော့ မပေးရင် ထောင်ချမယ်ဆိုတဲ့ အမိန့်ပါထက်ပါလာတယ်လို့ လဲဆိုပါတယ်………အဲ့ဒိကိစ္စအတွက် ကျနော်တို့ရပ်ကွက်သူ/သားအားလုံးက မကျေမနပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ သိအောင်ကူညီပေးပါလို့ဆိုပါတယ်။
ကျနော်က အဲ့ဒိမှာရှိတဲ့ လူမှုအဖွဲ့စီးတွေကို ပြောပြလို့မရဘူးလားလို့မေးတော့……ကိုယ်တို့အနေနဲ့မလှုပ်ရဲပါဘူးညီလေးရာတဲ့………လှုပ်တာနဲ့ KNU သို့DKBA နဲ့အဆက်သွယ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီး ပြဿနာတွေရှာတတ်လွန်းလို့ပါတဲ့………..မင်းလုပ်တတ်သလိုသာလုပ်ကွာလို့ပြောပြီးဖုန်းချသွားတယ်။
ပြန်ခေါ်ဖို့လဲ ဖုန်းနံပါတ်က မကျန်နေတော့ ဘာလုပ်ရမည်မသိ။သူ့အနေနဲ့လည်း များများပြောရင် ပြဿနာတစုံတရာ ရှိလိမ့်မည်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို ပြန်ခေါ်စရာ ပိုက်ဆံမရှိသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ခေါ်ကတည်း ကိုက ညီလေးဘာမှမမေးနဲ့နော် ကိုယ်ပြောတာကို ပဲ အသေချာနားထောင်ပေးပါ ဆိုတော့………….။
ကျုပ်တို့ လမ်း နိုင်လွန်ကတ္တရာ အိနေအောင် ခင်းတာတောင် တစ်အိမ် တစ်သောင်းပဲ တောင်းတယ်..
ကွန်ကရစ်ခင်းပြီး ၂ သိန်းတောင်းရအောင် အဆံတွေက ဘယ်အပေါက်က ထွက်ကြလို့ လဲဗျ
အဲဒီ..လာတောင်းတဲ့ ခရိုင်..ကဘဲ ကိုပြန်မေးလိုက်ပါလား…
ဖုန်းထဲ မှာ auto record software လေး ထည့်ထားဖို့ 
ကိုယ့်ကို ဘလိုင်းကြီး ဖုန်းဆက် ဆဲတောင်
ရီကောဒင်း နဲ့ 
တရားပြန်စွဲ လို့ ရတာပ
မသေမချာ မရေ မရာနဲ့ဆိုတော့ … နန်းရှင် လုပ်ပေးနိုင်တာ … ဒီဘလော့ပေါ်တက်ရေးတာပဲရှိတာ … ။
ဘယ်သူသိအောင်မှ ဘာမှ လုပ်ပေးလို့မရဘူးလေ … တိကျခိုင်မာတဲ့ အချက်မှ မပြောနိုင်တာ … ။ အကူညီကောင်းတာနဲ့ … ကိုယ်က ငပွကြီးဖြစ်ဦးမယ် ..
ဒါနဲ့ … နန်းရှင်ကို အားကိုးတကြီးဆက်သွယ်တယ်ဆိုတော့ … နန်းရှင်လည်း ပိုင်ရာ ဆိုင်ရာ မျက်နှာကြီး အသိုင်းဝိုင်းကများလား
မျက်နှာမကြီးဘူးဗျ………။မျက်နှာငယ်ဘဝ…………..။ကိုယ်လိုသူလိုလဲ ဖြစ်နေလို့ …………။ကျနော့်
သတင်းတိုသက်သက်ပဲ………..။သတင်းသမားဆိုတာ အချက်လက်ပဲ သိအောင်လုပ်ပေးတာ……..။
ဘာမှမတက်နိုင်ဘူး…….။ငှဲ ငှဲ နေရင်းထိုင်ရင်း သတင်းသမားကြီးထလုပ်လိုက်ပြီ။ငါကွ ကိုကိုနန်း…..။
နန်းရှင် ဆိုတော့ ထီနန်းပိုင်သူထင်လို့ အကူညီတောင်းတာ လုပ်ပေးလိုက်ပါကွယ်
စိတ်ညစ်တယ် ဒီလူတစ်ယောက်ကတော့ အထေ့အငေါ့မပါရင် စကားမပြောတတ်တော့ဘူးလား
ကောင်းကောင်းရေးဗျာ ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ စိတ်ဆင်းရဲတယ်။
ဖတ်ထားတဲ့ စာရသ လေးတောင် ဘယ်လွင့်သွားလဲမသိ။
ကိုယ့်ညီကို ရေ။မနက်က တွေ့ တဲ့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တွေမရှိတော့တာ ကျွန်တော်လဲဝမ်းသာရပါတယ်။ပြည်သူ့ အသံအပိုင်း
သီးခြားစီစဉ်ပေးစေချင်တယ်။တကယ် မတိကျတဲ့ သတင်းဖြစ်နေရင် ခက်ပီဗျာ။
Nan Shin ကိုကိုနန်းရေ…. ဆက်သာလုပ်ပါ…. အားပေးစောင့်မျှော်နေပါမယ်..။